ကြှနျတျောတို့ ဘာလုပျမိလို့လဲဗြာလို့ ကံကိုသာ ယိုးမယျဖှဲ့ရတော့မယျ့ မဈခီနဲ့ စမောလငျး – Sports A2Z
ရိုးမားအသငျးရဲ့ နောကျခံလူ ခရစ်စ စမောလငျးနဲ့ ကှငျးလယျလူ ဟငျးနရဈ မဈခီတာရီယနျတို့အနနေဲ့ ကြှနျတျောတို့ ဘာတှမြေား အတိတျဘဝက အကုသိုလျတှေ ကြူးလှနျမိလို့ ဒီဘဝမှာ “ကံဆိုးမ သှားလရော မိုးလိုကျလို့ရှာ”ဆိုသလို ဖွဈနရေတာလဲလို့ ဆိုးရှားတဲ့ ကွမ်မာကို ယိုးမယျဖှဲ့ရတော့မလို ဖွဈနခေဲ့ပွီလို့ ဘောလုံးပရိသတျတှကေ ရယျပှဲဖှဲ့နကွေပါတယျ။
Got to feel for Smalling and Mkhitaryan.
Left United to get away from Jose Mourinho and now will have to play under him at Roma.
Nightmare. 🤣🤣 pic.twitter.com/OwfhJUdWh8
— FootballFunnys (@FootballFunnnys) May 4, 2021
ဒါကတော့ သူတို့နှဈဦးအနနေဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ မလေ ၄ ရကျနကေ့ ရိုးမားအသငျးကနေ ရာသီသဈအတှကျ ခနျ့အပျလိုကျတဲ့ နညျးပွ ဂြိုဆေး မျောရငျညိုနဲ့ နောကျထပျ ထပျမံဆုံစညျးရတော့မယျ့ အနာဂတျကိုပဲဖွဈပွီး အင်ျဂလနျသားနဲ့ အာမေးနီးယားသားတို့ဟာ သူတို့နဲ့ အိုးလျထရကျဖို့ဒျမှာ အစေး မကပျခဲ့တဲ့ ပျေါတူဂီသားနဲ့ တှဆေုံ့ မကျြခုံးလှုပျနလေောကျပွီလညျးဖွဈပါတယျ။
Smalling and Mkhitaryan seeing Mourinho being announced pic.twitter.com/1BIUaUYMTo
— El_Niño9 🇪🇸 (@Torres_09Lfc) May 4, 2021
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးကို ၂၀၁၀ နှရောသီမှာ ရောကျလာခဲ့တဲ့ စမောလငျးဟာ အသငျးအတှကျ အခိုငျအမာ နရောပေးရခံရသူ တဈဦးဖွဈခဲ့သလို မဈခီတာရီယနျကတော့ ၂၀၁၆-၁၇ ရာသီမှာ အသငျးကို မျောရငျညိုနဲ့အတူ ရောကျရှိလာခဲ့သူတဈဦးဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ နှဈဦးစလုံးဟာ ဒီနညျးပွလကျထကျမှာ ခွစှေမျးတဖွညျးဖွညျး ကဆြငျးလာခဲ့သူတှလေညျးဖွဈပါတယျ။
Smalling and Mkhitaryan when finding out the man they travelled 1300 miles to get away from is turning up at training next week #Mourinho pic.twitter.com/0hIZH25pZV
— Alex 🦥🇦🇲 (@alexburtonjour1) May 4, 2021
ရိုးမားအသငျးက အငျတာမီလနျနဲ့ ဂြူဗငျတပျဈတို့ကို ရငျဆိုငျနိုငျဖို့ ချေါယူခဲ့တဲ့ မျောရငျညိုဆီက မကစားခငျြလို့ မိုငျပေါငျး ၁၃၀၀ ကြျောဝေးတဲ့ မနျခကျြစတာကနေ ထှကျလာခဲ့ကွပွီးတဲ့နောကျ တဈဖနျပွနျပွီး ဆုံစညျးရတော့မယျ့ သူတို့နှဈဦးကို မကုနျဆုံးသေးတဲ့ ရစေကျအတှကျ ပွိုငျဘကျ ပရိသတျတှကေတော့ တှဈတာပျေါမှာ နောကျပွောငျနခေဲ့ကွပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ မခနျ့မှနျးနိုငျတဲ့ ဘောလုံးမှာ မျောရငျညိုနဲ့ သူတို့နှဈဦး သငျ့မွတျခဈြကွညျသှားကွမလား၊ ယူနိုကျတကျမှာရှိတုနျးကလိုပဲ ခြောငျထိုး ခံရမလားဆိုတာကတော့ စိတျဝငျတစား စောငျ့ကွညျ့ရဦးမှာဖွဈပွီး မဈခီနဲ့ စမောလျဒီနီတို့ အဆငျပွကွေပါစလေို့ အားလုံးဝိုငျးပွီး ဆုတောငျးကွရငျတော့ ပိုကောငျးမယျလို့ ထငျကွောငျး တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျ။
Prayers up for smalling and Mkhitharyan 😭 https://t.co/OpmqSg99xo
— George Pass (@LandedJasper198) May 4, 2021
ZAWGYI: ရိုးမားအသင်းရဲ့ နောက်ခံလူ ခရစ္စ စမောလင်းနဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဟင်းနရစ် မစ်ခီတာရီယန်တို့အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေများ အတိတ်ဘဝက အကုသိုလ်တွေ ကျူးလွန်မိလို့ ဒီဘဝမှာ “ကံဆိုးမ သွားလေရာ မိုးလိုက်လို့ရွာ”ဆိုသလို ဖြစ်နေရတာလဲလို့ ဆိုးရွားတဲ့ ကြမ္မာကို ယိုးမယ်ဖွဲ့ရတော့မလို ဖြစ်နေခဲ့ပြီလို့ ဘောလုံးပရိသတ်တွေက ရယ်ပွဲဖွဲ့နေကြပါတယ်။
ဒါကတော့ သူတို့နှစ်ဦးအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၄ ရက်နေ့က ရိုးမားအသင်းကနေ ရာသီသစ်အတွက် ခန့်အပ်လိုက်တဲ့ နည်းပြ ဂျိုဆေး မော်ရင်ညိုနဲ့ နောက်ထပ် ထပ်မံဆုံစည်းရတော့မယ့် အနာဂတ်ကိုပဲဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန်သားနဲ့ အာမေးနီးယားသားတို့ဟာ သူတို့နဲ့ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ အစေး မကပ်ခဲ့တဲ့ ပေါ်တူဂီသားနဲ့ တွေ့ဆုံ မျက်ခုံးလှုပ်နေလောက်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကို ၂၀၁၀ နွေရာသီမှာ ရောက်လာခဲ့တဲ့ စမောလင်းဟာ အသင်းအတွက် အခိုင်အမာ နေရာပေးရခံရသူ တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သလို မစ်ခီတာရီယန်ကတော့ ၂၀၁၆-၁၇ ရာသီမှာ အသင်းကို မော်ရင်ညိုနဲ့အတူ ရောက်ရှိလာခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ နှစ်ဦးစလုံးဟာ ဒီနည်းပြလက်ထက်မှာ ခြေစွမ်းတဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာခဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးမားအသင်းက အင်တာမီလန်နဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်တို့ကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ မော်ရင်ညိုဆီက မကစားချင်လို့ မိုင်ပေါင်း ၁၃၀၀ ကျော်ဝေးတဲ့ မန်ချက်စတာကနေ ထွက်လာခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက် တစ်ဖန်ပြန်ပြီး ဆုံစည်းရတော့မယ့် သူတို့နှစ်ဦးကို မကုန်ဆုံးသေးတဲ့ ရေစက်အတွက် ပြိုင်ဘက် ပရိသတ်တွေကတော့ တွစ်တာပေါ်မှာ နောက်ပြောင်နေခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ ဘောလုံးမှာ မော်ရင်ညိုနဲ့ သူတို့နှစ်ဦး သင့်မြတ်ချစ်ကြည်သွားကြမလား၊ ယူနိုက်တက်မှာရှိတုန်းကလိုပဲ ချောင်ထိုး ခံရမလားဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်ရဦးမှာဖြစ်ပြီး မစ်ခီနဲ့ စမောလ်ဒီနီတို့ အဆင်ပြေကြပါစေလို့ အားလုံးဝိုင်းပြီး ဆုတောင်းကြရင်တော့ ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ကြောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ ခေါငျးအကောငျးဆုံးကစားသမားအဖွဈ ဝကျဈဟမျးကှငျးလယျလူ စံခြိနျတငျထား